4 “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, tora chidhinha, uchiise pamberi pako, unyore uchiita zvokutemera pamusoro pacho mufananidzo weguta, iro Jerusarema.+ 2 Zvino urikombe,+ urivakire rusvingo rwokurirwisa,+ urigadzirire rusvingo rwokurikomba narwo,+ urigadzirire misasa uye uise zvokugumurisa masvingo kumativi aro ose.+ 3 Iwe tora gango resimbi, uite kuti rive rusvingo rwesimbi pakati pako neguta racho, unangidzire chiso chako kwariri, uye rinofanira kukombwa, uye iwe urikombe. Ichi chiratidzo kuimba yaIsraeri.+ 4 “Zvino iwe, urare norutivi rwako rworuboshwe, uise kukanganisa kweimba yaIsraeri pamusoro parwo.+ Nokuti uchatakura kukanganisa kwavo kwemazuva aucharara narwo. 5 Ini ndichakupa makore okukanganisa kwavo+ kuti asvike mazuva mazana matatu nemakumi mapfumbamwe,+ uye uchatakura kukanganisa kweimba yaIsraeri. 6 Unofanira kuapedza. “Kechipiri, urare norutivi rwako rworudyi, utakure kukanganisa kweimba yaJudha kwemazuva makumi mana.+ Zuva rimwe chete richava gore, zuva rimwe chete richava gore, ndizvo zvandakupa.+ 7 Uchanangidzira chiso chako pakukombwa kweJerusarema,+ ruoko rwako rwakafukurwa, uye uriprofitire. 8 “Tarira! ndichakusunga netambo+ kuti urege kupindukira kune rimwe divi rako uchibva kune rimwe divi rako, kusvikira wapedza mazuva okukomba kwako. 9 “Zvino iwe, tora gorosi+ nebhari nebhinzi hombe+ nenyemba+ nemapfunde nesipereti,+ uzviise mumudziyo mumwe chete, ubike zvokudya zvako nazvo, zvemazuva auchange wakarara norutivi rwako; uchazvidya kwemazuva mazana matatu nemakumi mapfumbamwe.+ 10 Zvokudya zvako zvauchadya zvichange zvakayerwa—mashekeri makumi maviri pazuva rimwe chete.+ Uchazvidya nguva nenguva. 11 “Uchanwa mvura yakayerwa, chikamu chimwe chete pazvikamu zvitanhatu zvehini. Uchainwa nguva nenguva. 12 “Uchazvidya sekeke reraundi rebhari;+ ucharibika netsvina+ yevanhu yakaoma ivo vachizviona.” 13 Jehovha akatiwo: “Vanakomana vaIsraeri vachadya zvokudya zvavo zvisina kuchena+ saizvozvi vari pakati pemarudzi andichavaparadzira kwaari.”+ 14 Zvino ndakati: “Maiwe, haiwa Changamire Ishe Jehovha! Tarirai! Mweya wangu hauna kusvibiswa;+ uye handina kumbodya chitunha kana mhuka yakabvamburwa kubvira ndichiri muduku,+ kunyange nazvino, uye mumuromo mangu hamuna kumbopinda nyama isina kuchena.”+ 15 Naizvozvo iye akati kwandiri: “Ona, ndakupa ndove yemombe panzvimbo petsvina yevanhu yakaoma, uye ubike zvokudya zvako nayo.” 16 Akaramba achiti kwandiri: “Mwanakomana womunhu, tarira ndichatyora tsvimbo dzinoiswa zvingwa zvakaita serin’i,+ muJerusarema, vachadya zvokudya zvichiita zvokuyerwa vachizvidya mwoyo,+ vachanwa mvura ichiita zvokuyerwa uye vachitya kwazvo,+ 17 kuti vashayiwe zvokudya nemvura uye kuti vatarirane vakatyamadzwa uye vaparare nokuda kwokukanganisa kwavo.+